7 shay oo nololosha farxada ka qaada – JOORNAAL
7 shay oo nololosha farxada ka qaada
May 7, 2017 ~ joornaal
Ma is aragtaa adigoo nimco ku jira in aadan mar mar faraxsanayn? Arintaas sababteeda inta badan ma tahay xaalada aad markaas ku sugan tahay (Happiness that depend on the situation?) Waxaa jira dad badan oo ku nool faqiirnimo hadana faraxsan. Waxaa jira dad badan oo meel dagaal ka socdo oo nabad aan lahayn ku nool hadana faraxsan.
Marka su’aasha meesha taal waxaa weeye: Haddii aysan farxadu gebi ahaanteed aysan ku dhisneyn meesha iyo xaalada aad ku sugantahay markaas, maxay ku dhisantahay hadaba?
Waxay ku xirantahay waa aragtidaada. Waxaa laga yaaba in koob wax ku jiraan intaad fiiriso aad aragto koob bar buuxa ama koob bar maran. Sidaas oo kale intaad noloshaada fiiriso ayaad dhihi walaahi waxaan ahay qof aad u nasiib badan oo Allah khayr faro badan waafajiyay ama waxaad leedahay balaayo iyo amuuro ayaa igu dhacay oo fursado qaali ah baa iga lumay oo waxaan ahay anigoo dhan nin faashil ah.
Bal aan aragno arimo dhowr ah oo markaad is fahamsiiso kuu diidaya farxada. Waxaan kaloo ogsoon nahay in xadiis nebigeena laga weriyey lagu xarimay in la yiraahdo “Haddii aan saas iyo saas sameyn lahaa waxaas iguma dheceen” oo weliba lagu sii daray in ay arintaas tahay albaab aad u fureyso sheydaanka.
Haddii aan in badan ka haysan lahaa (adigu meesha banaan buuxi)
Iska daa in aad wax kastaa boqolkiiba boqol aad saarto (Stop trying to be perfect) Weligaa wax ayaa kaa maqnaan ama kaa gaabanaya. Dadka aduunka ugu taajirsan waxbaa ka yara dhiman oo ay rabaan in ay wax ka qabtaan ama gaaraan. Ha fiirin oo kaliya waxa aad ku xuntahay ee fiiri waxa aad ku fiicantahay. Haddii aad hadalka ku xuntahay waxaa laga yaabaa in aad ku fiicantahay dhegeysiga. In badan ka fakar oo ku qilaawee waxa aad ku fiicantahay isla markaana raadi sidii aad dadka ugu faa iideyn lahayd hibadaas Allah ku siiyey.
Haddii aan lacag badan haysan lahaa
Qof dareensan ma jiro inuu lacag ku filan haysto. Qofkaad rabto ee wadada maraya jooji oo waxaad ku tiraahdaa ma isticmaali kartaa SAR 1000 oo dheeri ah bil walba. Waxaa ay ku leeyihiin “Haah”. Xataa dadka aad u haysato in ay wax walba isku saaranyihiin waxaa ay ku fakarayaan wax aaney haysan oo rabaan in ay gataan. Waa xaqiiq in lacagtu ay nolosha fududeyso oo ay raaxada kuu sahasho laakiin kaama dhigi karto mid faraxsan, Imisa qof ayaa malaayiin doolar oo baqtiya nasiib ku guuleystey oo hadda aan shilin ka ahayn? Imisa ayaa ciyaar yahah malaayiin doolar sameeyey maantana ka tuugsanaya.
Haddii aan mar gaari lahaa hadafkeyga
Hadafka (Goals) waa seef laba afley ah. Waa sax in hadafku hore kuu dhaqaajiyo, uu ku dhiiri geliyo, kugu kalifo in aad si wanaagsan wax u qabsato. Laakiin hadafka waa ku talax tegi kartaa ama waa ku dumin karaa.
Markii aad sameysato hadaf aan macquul ahayn ama la gaari karin, waxaa kugu dhacaya jaah wareer, ciil kaambis, dawdar nimo, iyo farxada oo kaa lunta. Waxaa dhici karta xataa in aad ka shakiso kartidaada.
Haddii aan haysan lahaa shahaado wax barasho oo wanaagsan
Shahaado jaamacadeed intooda badan ma haysan shaqsiyaadkii i taariikhda aduunka soo maray ee raadka weyn ku reebay. Bill Gates iyo Steve Jobs jaamacad ma dhameyn. Albert Einstein dugsiga sare waa ka haray, markii ugu horeysana wuu ku dhacay imtixaankii jaamacada.
Waxaa aad xooga loo saaraa in shahaado la soo qaato waayo waxaa la saaraa qiime weyn. Waxaa naloo sheegay in aan u baahanahay shahaado si aad shaqo u helno, lacag u sameyno oo aduunka wax uga badelno. Shahaado Wax barasho waa muhiim laakiin ma ahan sida kaliya ee aad horumar ku gaari karto. Imisa qof oo aan shahaado jaamacad ka soo qaadan ayaa aduunkaan raad weyn ku reebay ama dhinac ay takhasus ku lahayn ka gaaray makaan weyn.
Hoosta ka xariiq in jaamacad adigoo shahaado ka soo qaadan aad wax weyn qaban karto oo aysan shahaado kuu diideyn in aad meel gaarto. Haddii aadan dhaqtar ahayn waxaad dhisi kartaa Hospital ay ka shaqeyso kumanaan dhaqaatiir ah.
Haddii aan caqabado badan i hortaageneyn
Qof kasta caqabad ayaa hortaal. Mararka qaar waxaan aragnaa dad horumar sare gaaray xaga ganacsiga ama madaxtinimo, markaas ayaan malaynaa in ay ku nool yihiin farax iyo reyn reyn. Kaas waa qurux badanyahay, kaas lacag faro badan buu haystaa, kaas wuxuu haystaa waasado adago iyo xiriir dad sare. Waxaad aragtaa waa khayb ka mid ah noloshooda taas oo ah mida wanaagsan. Qaybta foosha xun cid ku tuseysa malaha. Binuu aadmiga intiisa badan kuu sheegi maayaan waxa ay dhibaato iyo caqabado soo maray ama haysta si ay u gaareen ama ku joogaan meeshaan ay fadhiyaan hadda. Lama socotid dhibaatada ka haysata xaga caruurta, xaaska, qaraabada iyo wixii la mid ah. Marka ha isku daalin qof aad u maleyso inuu kaa roon yahay waayo xaalada dhabtaa Allah unbaa og.
Waxaad kaliya oo u baahantahay in aad ogaatid in cid walbaa caqabad ay ka hor imaaneyso. In ay kaa hor imaan doonto, isla markaana aad ka gudbi doonto. Waxba yaysan hurdada kaa lumen.
Haddii xaaskaygu ii jeclaan lahayd sida aan rabo in ay ii jeclaato
Anagoo dhan waxaan rabnaa in aan ku noolaano farxad iyo reyn reyn. Waxaan rabnaa in qofka garabkeena joogaa in uu farxad iyo reyn reyn ku jiro. Laakiin inta badan dariiqa saxa ah looma maro, mana ahan ula kas ee waa naga noqotaa sidaas.
Xaaskaaga looma sameyn sidaada oo kale. Inta badan ma oga waxa dhiig karka kugu kiciya. Laakiin adiguna sidoo kalaa tahay ee ogow. Waa in aan baranaa lana qabsanaa sidii aan ula falgeli lahayn am aula macaamiloon lahayn xaajiyada. Waa in aan ogaanaa meelaha miinooyinka ku aasan yihiin si aad uga leexato, waa in aad barataa xuduudaha. Waa in uu mar walba furan yahay albaabka wada hadalka iyo fahamka. Markay kugu soo dhacdo in aad ku qaraxdo xaajiyada is xasuusi wixii isku kiin keenay ee aad ku dooratay markii hore. Waxaad heleysaa xalka isla markiiba. Waxaa Soomaalidu ku maah maahdaa “Hubsiimo Hal baa la siistaa” Maah maahdaan waxaa la yiri waxaa ay ku timid sidaan. Nin ayaa hal geela keensaday suuqa maalin. Nin ayaa gorgoriyay hashii oo ninkii ku yiri hasha waxaan kaaga gadanayaa xikmadan ah “hubsiimo hal siiso”. Ninkii hashii ayuu ninkii siiyay. Gurigiisa ayuu yimid oo xaaskiisa waah ore ayuu soo masaafeystey weligiisna hore uma uusan arkin sodogii. Markuu gurigii soo galay ayuu arkay nin dhex bilqan gurigii. Markaas ayuu toorey laba afley ah la soo baxay oo is yiri ku kala goo. Haddana wuxuu xusuustey inuu hal geel ah soo siistay inuu wax hubsado. Naagtiisii oo xoolo lisaysa ayuu ku yiri waayo ninkaan guriga dhex jiifaa? Markaas ayay tiri waa odeygii aabahay ahaa. Ninkii dhidid ayaa ka soo booday oo wuxuu yiri “Hubsiimo hal baa la siistaa”.
Inta badan waxyaabaha khaylada iyo muranka dhex dhiga reeraha waa in qof walba uu wax is moodsiiyo oo isagoon xaqiiqda hubsan is buufis isku bilaabo ama ayaduba isku bilowdo.
Haddii dadku ay qiimeyn lahaayeen shaqadeyda wanaagsan
Waxaan inteena badan ku mashquulsanahay nafteena in ka badan intaan ku mashquulsanahay dadka hareereheena jooga. Waxaan ku mashquulsanahay baahideena daboolkeeda, waxaan rabno in aan helo, in aan helno madadaaladeena iyo wixii la hal maala.
Sidaas aad tahay ayaa dadka intooda badan iskugu mashquulsanyihiin. Ma ahan qofkaan aad leedahay muxuu waxa weyn ee aan sameeyay u arki la yahay mid adiga markii horeba kuu soo jeeday. Adiga ayaa dhibkaas ku hayaa, laakiin ogow adiga qudhaadu dad badan ayaa is leh muxuu noo arki waayay. Marka wax ba ha ku daalin arintaan qiimeynta iyo in la aqoonsado waxa aad hayso ama qabaneyso. Adiga hawsha u qabo in aan cidi ku arkayn oo kale kuna arki doonin oo kaaga mahad celin doonin.
Adiga naftaada iyo maankaaga kaliya ka adkow. Ogow qiimahaaga, xariif nimadaada, iyo waxa aad aduunka ku soo biirineyso. Noqo mid wax laga faa iido asagoo aan rabin in la aqoonsado faa iidadaas uu dadka wax taraayo. Allah ayaa kuu kaydinaya waxa wanaag ah ee aad qabaneyso ee haddii aad binuu aadmi ka sugto aqoonsi nolosha ayaa kugu qaraaraaneysa. Waanaba denbi in aad wanaag u sameyso ha lagugu amaano marka horeba.
‹ PreviousAqoontu waa tarjumaad
Next ›Cawaaqib Xumada Ka dhalata Akrasia